Turkish inotsamwisa Syria harbinger yeEurope: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 10 October 2019	• 6 Comments
Zvakanga zvichitoseka kuti maDutch ezvematongerwo enyika vakaita sei nezuro pakurwiswa kweTurkey kuNorth Syria. Yakanga iri mumapepanhau epasi rese kwemazuva kuti Turkey yaita chibvumirano neUS uye kuti Trump abvise mauto ake kuti ape mukana kurwisa kweTurkey. Isu tinodaidza iyo '' mustard mushure mekudya '. Wobva waomera nyika yakadaro pamberi pechino chema kana ichinge yanonoka. Zvinogona kuve pachena izvozvi kuti vezvematongerwo enyika vanoziva nezveambotaurwa master script uye kazhinji ndivo vanoita "Ah takatsamwa seiTamba. America inobvisa kubva kuKurdish YPG varwi vaimbove vachishandiswa kurwisa iyo-yakasikwa IS (yaimbova ISIS). Izvi zvinonzwika kunge zvisinganzwisisike kwauri, izvo zvandinoti IS IS akasikwa? Ipapo iwe unofanirwa kutanga waona kuburikidza neye master script.
Iyo master script ndeyekuti Turkey yaifanira kukura musimba. Turkey yaida nzira yesimba reiyo uye izvo zvinoreva kuti kuyerera kwevapoteri kuEurope. Nekutanga hondo muSyria kuburikidza nekuzvimiririra -vakagadzira proxy mauto, haungobatsire indasitiri yemaoko, asi Turkey yakabata goridhe. Kana iyo Turkey yakazarura masuwo ehupoteri kuyerera kuenda kuEurope, izvo zvaizoumba mhirizhonga yakawanda muEurope. Kune izvo panofanirwa kuve nekumanikidzwa zvishoma pombi iyo, sekunge shongwe yemvura inoshandiswa kuisa kumanikidza pamapombi. Saka kurwa kwakatanga muSyria. Hondo yakaisa dzvinyiriro pahutungamiriri kuburikidza nevapoteri vazhinji vakanaka. Zvichakadaro, mabasa epachivande epasi rese kubva kuNetherlands nedzimwe nyika aibatsirana nekugona "kusaita chero chinhu" kune avo vese vema jihadist avo vaive nechido chekuenda kuSyria. Aya ndiwo maitiro aunogadzira mauto ehupfumi uye uchichengetedza kutaridzika kwako kwezvematongerwo enyika kuburikidza nehurongwa hwekutaura nevezvematongerwo enyika vakatsamwa uye Jeroentjes Pauw naMatthijs van Nieuwkerkjes vanogona kuvhara maziso evanhu zvakanyanya (vachipokana nemubhadharo wakakura wenyaya).
Turkey panguva ino yakavaka indasitiri yakasimba yemauto pasi penguva yeAKP neyeEdogan, iyo isina midhiya yakatombo tarisa. Iri kukwanisa ikozvino kuburitsa mahombe frigates pachayo, inogadzira matangi, drones, kurwisa helikoputa zviri nani kupfuura Apache uye saka chinyorwa chinogona kupedzwa. Nyika yacho zvakare iine uto raunoudza kuramba uye kana richine basa mukati memazuva mashoma zunguza muEurope. Turkey yakaita izvo zvakaitwa neGerman mu30 yezana ramakore rapfuura, apo pakanga pasina munhu akateerera. Iyo ine yechipiri yakakura mauto mukati meNATO mubatanidzwa (mushure meUS); mubatanidzwa izvo izvo zvisisipo, nekuti EU yakatsamwira Turkey uye gurukota Stefje Blok inoda Turkey kodzero yekuvhota mukati meNATO uye US yakanga yatove kuitirana nharo neTurkey uye yakatotemerwa zvirango. Iyi masanctions yakakonzera iyo lira yeTurkey kudonha zvakanyanya, asi zvinopesana nezvatinofunga mhedzisiro iyi, yakavanzika zvakanyanya kuhupfumi hweTurkey. Haisi iyo chete iyo inobereka yakawanda yevashanyi (nekuda kwekuti zororo rakachipa), asi zvakanyanya kunaka kune zvinotengesa kunze. Sezvo Turkey ichigadzira zvombo zvakawanda kupfuura zvaungave uchiziva, izvo zvakanaka kwazvo kune vemauto indasitiri, kuitira kuti iwe senyika ugare mari mairi.
Turkey inogona saka kuburitsa zvingangoita zvese pachayo uye kunyange iine 5e chizvarwa fter jet pasi pekuvandudzwa. Turkey yakagadzirira iyo yakareba-yakarongwa yekunwa kweEurope kuburikidza neBlitz Krieg. Nezve izvo, zvinobatsira kana paine kare mhirizhonga muEurope uye Brexit yakashandisirwa izvi, asi zvichabatsira zvakare kuti polarization pakati kuruboshwe kurudyi yakawedzera kukwira kumusoro kuburikidza (ugandanga hwakagadzirwa nemasevhisi ivo pachavo). Iyo wick inongoda kukandwa muhupfu keg mukati memiganhu yeEU. Mamwe mashoma mashoma mawairesi enhau dzakaitika; izvo zvichaita zvishamiso. Kana iyo Turkey ikasanganisa zvinogumbura muNorth Syria nekuvhurwa kwekupotera taputa kuenda kuEurope (nekuti EU haisi kuda kuenda nenzira yese yakavimbiswa 6 bhiriyoni yekutsigirwa yekutambira; nekuti EU yave ichinetseka kwemakore nekutumirwa kweTurkey kuEU uye nekuti EU haidi kutsigira nzvimbo yakachengetedzeka yekutambira vapoteri muNorth Syria), zvino inodiwa IS-IS varwi vanoyerera kuenda kuEurope uye ipapo unogona kufambisa iyo proxy hondo kuenda kuEurope nzvimbo uye une dambudziko, iro Turkey rinobva raita sevaponesi.
Kuti VaTrump vari kudonhedza varwi veKurdish YPG sechitinha, ((kana iwe ukaona tenzi script) zvichinzwisisika. EU inogona kunge ichipomerazve mhosva yaTrump, asi zvishoma nezvishoma isu tiri kuziva nezvekupokana kwezvematongerwo enyika.
Isu tiri pamangwanani ekumuka kweHurumende yeOttoman uye Turkey ine zvinhu zvese. Izvo zvese zvinoenderana nescript script, asi ini ndichatsanangura izvo zvakare mubhuku rangu idzva. Ini ndatozvitsanangura kazhinji pane saiti, asi dzimwe nguva zvinotora nguva kuti penny ikwire. Turkey ndiyo nyika nyowani simba uye US ndiye kumadokero humambo hweRoma pakupera kwechiLatin. Iyo yakanyatsovakwa mhando 'yerudyi' (pamwe chete nekufunga kwakadzama kuburikidza nechaipi Trump), ichave yakawedzera nekupusha hupfumi hweAmerica. Izvi zvichaita naTrump uye iro rekare gwara rezvematongerwo enyika richamutswa zvakare. Pnguva imwecheteyo, iwo maitiro ekudzivirira kushambadzira uye kushoropodzwa kweiyo mamiriro ekunze ari kuitirwa; nekuti izvo zvese zvakabatana neiyo 'chaiyo' brand. Mepu yemigwagwa kuhurumende yepasi rose inofanirwa kukwanisa kutumirwazve zvakakwana, ichibvumira mhando 'kurudyi' kupihwa simba rekuzvipomera nekuda kwehupfumi hwehupfumi uye mhirizhonga. Iyo yekupedzisira ndiyo yakamirira America neEurope. Uye ipapo iyo yekare nyeredzi yeRoma-jasi rinotanga kushanda: "Ordo ab Chao". Iwe unotanga kugadzira nyonganiso uye wobva wadzoreredza kurongeka. Iyo yekuraira nyowani ichauya kubva kuEdogogan muEurope, ndiyo yave iri fungidziro yangu kwemakore. Tora zvidzidzo zveTurkey.
Source chinyorwa listings: telegraaf.nl
Vatongi vechiKurusi vari pasi pezvigadzirwa zvejasi mhirizhonga France yakati Erdogan
2023 Gore iro Europe yakabatana muUtoman Empire
Kurwisa kweTurkey yeSiriya: NATO nhengo inorwa nevapanduki vanotsigirwa nhengo yeNATO
IYI nzvimbo yakarasikirwa muSiria neIraq inopedzisira yava kutyisa kuEurope?
Tags: kurwisa, EU, Featured, kukwevera, misasa, caged, Kurdish, NATO, Noord, zvinogumbura, Siriya, shure, turkey, VS, YPG
« Kuparadza Kupandukira boka revateresi vakabhadharwa
Extinction Rebellion director Margaret Klein Salamon: "Chinhanho chinotevera ndechekunyepedzera kuti zvokwadi ndeyechokwadi" »